Mashiinka Shot Benty, Machine Benty, Hook Shot Benty Machine - Ding Tai
Bambooyinka Shot Bift ee Tayada Sare ee Tayada Sare
Yancheng Ding Tai Machines Co., Ltd. waa shirkad ku howlan qalabka rinjiga, ciidda qalabka nadiifinta qaraxda iyo sameynta naqshadeynta qalabka iyo soo saarista shirkado gaar ah. Shirkadda oo si fiican u qalabaysan, xoog farsamo oo xoog leh, oo leh khibrad sannado badan u leh nashqadeynta iyo warshadeynta. Alaabtu waxay si fiican u iibiyaan in kabadan 40 wadan iyo magaalooyin, kuwaas oo si balaadhan looga isticmaalo tamarta dabaysha, duulista, macdanta, mashiinada, dhismaha, dhismooyinka, warshadaha, macdanta iyo warshadaha kale.
Muuqaal Dheeraad ah
Hordhac iyo adeegsiga mashiinka ruushka toogashada ee Mashiinka wax duqeynta waa nooc ka mid ah tikniyoolajiyadda daaweynta si ay u qarxiso ciidda birta ah iyo tan bir ah ee ku taal dusha sare ee sheyga walaxda leh xawaare sare by mashiinka rasaasta toogashada. Marka la barbar dhigo teknoolojiyadda kale ee daaweynta dusha sare, way dhakhso badan ...
Ku Saabsan Shirkadda Dingtai: Qalabkayaga gubashada leh waxay si wax ku ool ah uga saaraan wasakhda, nadiifinta iyo sagxadaha dusha sare, ku dar dardarta si kor loogu qaado isku dhejinta rinjiga iyo kordhinta nolosha dahaarka ee codsiyada birta. Nala soo xiriir, waxaan kaa caawin karnaa: Yaraynta Downtime Kordhinta Waxsoosaarka Waqtiga Wax soo Saarka Sare ...
toogashada Qaybo ka mid ah Xaraashka, toogtay Mashiinka Peening, Mashiinka ololka rasaasta, Mashiinka Shot Benty, Shot Benty Turbine, Shot Benty Wheel, Dhamaan Alaabada